Bursa, Railway iyo Yenişehir Airport | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaBursa, Railway iyo Yenişehir Airport
15 / 02 / 2020 16 Bursa, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
bursa tareenka iyo garoonka diyaaradaha yenisehir
Xal fudud, waxaan ku kicin karnaa kooxaha hurdada waxoogaa yar oo maalgashi yar ah isla markaana aan abaabulno maalgashi la'aan. Maalgashi yaryar, waxaan ku kordhin karnaa heerarka horumarka goboladayaga dhaqaala ahaan dib-u-dhaca ah.
Fursad noocan oo kale ah ayaa magaaladeena ka jirta. Garoonka diyaaradaha ee magaalada, halkaas oo diyaarado 70-80 qof ay soo degi karaan, ayaa si lama filaan ah ugu filnaa. Markii aan dhisnay garoon diyaaradeed oo caalami ah, dhaqaalaha Bursa wuu duuli lahaa. Daraasiin diyaaradeed oo ka soo degi doona garoonka diyaaradaha ayaa keeni doona boqolaal iyo kumanaan ganacsato ah, dalxiisayaasha ayaa u imaan doona Bursa sida roobka; dollar iyo euro waxay ku duuli lahaayeen hawada. Waa macquul in la aado garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul 2-2.5 saacadood, waxaa jira garoomo diyaaradeed (Kocaeli-Eskişehir-Kütahya) oo aan ka shaqeyn magaalooyinka ku hareereysan, ma jiraan garoon diyaarado caalami ah oo la mid ah xaaladaha cimilada oo la mid ah, ma jiraan rakaab ku filan inay ka duulaan Bursa ilaa Ankara ama Istanbul. dhegta lama fallaadhin. Meeshu sidoo kale diyaar bay ahayd, qaybo aan la adeegsan madaarka milatariga Yenişehir.
Gegada dayuuradaha waxaa la dhisay dabaysha dhismaha garoon diyaaradeed. Isla markii la sameeyay, sixirkii oo dhan waa jabsaday. Maddaarka, oo lagu furay rajo weyn, ma uusan shaqeynin wax kasta oo la qabtay. MARKA ayaa duulimaadyo dhowr jeer ka qaaday rakaab la'aan. Dhowr duullimaadyo "jaartarka" kuma badbaadin garoonka diyaaradaha ee leh rajo weyn. Qolka dhismaha garoonka diyaaradaha ayaa sidoo kale la waayey ka dib markii uu helay wixii uu doonayay. Hada waxaan haysanaa garoon diyaaradeed oo qiimahiisu yahay 500-600 milyan oo doolar laakiin waxaan rajeyneynaa inaan faa iido yeelan doono.
Fikradayda, garoonkan waa hurdo weyn. Waxaan leenahay qiimo dhaqaale oo weyn. Taladaydu waxay tahay inaan ka dhigo garoonka diyaaradaha Yenişehir xarunta xamuul ee dalkeenna. Waxa kaliya ee la sameyn karo ayaa ah in garoonka diyaaradaha lagu xiro nidaamka tareenka, laga bilaabo saldhigga tareenka Mekecek ee gobolka Bilecik. Si aad ugu gudubto dhamaadka kale ee qadkaan dekada Gemlik iyo aaga bilaashka ah ee Gemlik ayadoo loo maro Iznik. Bursa, oo ah magaalada 5-aad ee ugu weyn dalkeenna marka loo eego tirada dadka, ayaa timid kadib gobollada Istanbul iyo Kocaeli marka laga hadlayo wax soo saarka warshadaha. Gobolkeenna waxaa ka jira shan iyo toban aagag warshadeed oo abaabulan, oo ay ku jiraan İnegöl. Caqli ahaan waa wax aan la aqbali karin in gobolladan ay ahaadaan kuwa ka baxsan shabakadda tareenka. Ka fikir waxa dhici doona goortan, oo loo tixgelin karo bilowga khadka Mekecek-Bursa-Bandırma, iyo sida ay u abuuri karto soo kabasho dhaqaale.
Degmooyinka Yenişehir iyo İznik, oo sanado badan haajiray, waxay ku imaan doonaan nolosha dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba.
Gegada dayuuradaha ee Yenişehir waxay noqon doontaa xarunta xamuulka hawada ee dalkeena.
Xamuul kasta oo cayn kasta ah ayaa ka imaan doona xaruntan ilaa aagagga warshadaha ee Istanbul-Kocaeli-Central Anatolia iyo Bursa iyo xamuul nooc kasta leh waa la soo diri doonaa.
Gemlik waxaa ku yaal aagag xor ah iyo 5 dekedo oo bilaash ah, mid kamid ah degmooyinka dhexe. Waxay noqotay xarun logistics oo muhiim u ah waddankeena.
Waxa kaliya ee la sameyn karaa waa in lagu xiro wadada tareenka ilaa İnegöl, Yenişehir, İznik oo leh maalgashi yar marka loo eego wadada weyn, in la dhaqaajiyo garoonka diyaaradaha ee Yenişehir sidaas darteedna la siiyo fursado shaqo kumanaan qof.
Sanadkii 1948, khadka Bursa-Mudanya ayaa si kumeel gaar ah loo xiray qasaaro darteed. Sannadkii 1953dii, ayaa laga saaray biraha. Waxaan u maleynayaa in ra'iisul wasaare Menderes, oo go'aankan qaatay, uusan ku qanacsaneyn xaaladdan, taas oo ah, in Bursa uusan ku xirneyn wadada tareenka. Wuxuu rabay inuu ku xiro Bursa tareenka tareenka. Waxaan rajeyneyaa inuu dhageysan doono wixii aan qorey si Bursa u hesho khadka tareenka ee la sheegay 63 sano ka hor.
Febraayo Domination wargeys
Fiiri Xogta Buuxda ee Ekrem
Wadada Wadada Diyaaradaha ee Magaalada Bursa iyo Yenişehir
Bursa-Yenişehir Airport-İnegöl inta udhaxeysa xaafadaha iyadoo la adeegsanayo qeyb ka mid ah khadka loo yaqaan 'YHT line ...
Ogeysiinta Qandaraaska: Yenişehir-Osmaneli iyo Yenişehir-Bozüyük Raadinta Mashaariicda Tareenka iyo…
Yenişehir - Osmaneli iyo Yenişehir - Bozüyük Railway Raadinta, naqshadeynta iyo la tashiga…
Yenişehir - Osmaneli iyo Yenişehir - Mashruuca Sahaminta iyo Wadatashiga Bozüyük
Yenişehir - Osmaneli iyo Yenişehir - Sahanka Mashruuca Tareenka Bozüyük, mashruuca iyo…
Yenişehir - Osmaneli iyo Yenişehir - Sahanka Mashruuca Tareenka Bozüyük iyo mashruuca…
Bursaray Ma geli karin Madaarka Yenisehir
YHT Station ayaa lagu rakibi doonaa meel u dhow Garoonka Dhexe ee Yenishehir
TCDD Bandırma - Bursa - Ayazma - Osmaneli Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare Bursa - Yenişehir…
TCDD Bandırma - Bursa - Ayazma - Cusmaan Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare, Bursa - Yenişehir…
Qadka Tareenka ee Bursa-Mudanya
Gemlik lacag la'aan ah